KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Sign Language Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Nea enti a Yehowa Adansefo nkɔ ɔko na edidi so yi:
Yetie Onyankopɔn. Bible ka sɛ, wɔn a wɔsom Onyankopɔn de “wɔn nkrante bɛyɛ nsɔw,” na “wɔrensua akodi bio.”—Yesaia 2:4.
Yetie Yesu. Yesu ka kyerɛɛ ɔsomafo Petro sɛ: “San fa wo nkrante no hyɛ nea ɛhyɛ, na wɔn a wɔtwe nkrante nyinaa bewu nkrante ano.” (Mateo 26:52) Yesu asɛm no kyerɛ sɛ, ɛnsɛ sɛ n’akyidifo kɔ ɔko.
Yesu kaa sɛ, ɛnsɛ sɛ n’asuafo yɛ “wiase no fã.” Yesu asuafo tie saa asɛm no, enti wɔmfa wɔn ho nhyehyɛ amanyɔsɛm mu koraa. (Yohane 17:16) Sɛ asogyafo kɔ ɔko a, Yesu asuafo nyɛ ɔyɛkyerɛ ntia, na sɛ obi pɛ sɛ ɔkɔ sogya a, wonsiw no kwan.
Yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa. Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo sɛ ‘wɔnnodɔ wɔn ho.’ (Yohane 13:34, 35) Ɛno kyerɛ sɛ, Yesu asuafo a wɔwɔ wiase nyinaa bɛyɛ anuanom, enti obiara nni hɔ a ɔbɛtwe tuo ne ne nua akɔko.—1 Yohane 3:10-12.
Yesuasua tete Kristofo no. Nhoma bi ka sɛ: “Yesu akyidifo a wɔtenaa ase tete no ankɔ ɔko, na wɔankɔ sogya nso,” efisɛ na wohu sɛ “ɛne sɛnea na Yesu dɔ nkurɔfo, ne ahyɛde a ɔde mae sɛ yɛnnɔ yɛn atamfo no nhyia.” (Encyclopedia of Religion and War) Peter Meinhold yɛ Germanni a osua nyamesom ho ade. Ɔno nso kaa Yesu asuafo a wɔtenaa ase tete no ho asɛm sɛ: “Ná wonim sɛ, obi rentumi nyɛ Kristoni na ɔnsan nyɛ sogyani.”
Nea yɛyɛ de boa ɔman nkɔso
Yehowa Adansefo yɛ ɔman mma pa. Wɔnyɛ biribiara mfa nsɛe ɔman a wɔte mu no asomdwoe, enti wɔn ho nyɛ hu. Bible akwankyerɛ a edidi so yi nti, yebu aban mpanyimfo:
“Ɔkra [anaa onipa] biara mmrɛ ne ho ase nhyɛ atumfoɔ a wɔkorɔn no ase.”—Romafo 13:1.
“Muntua Kaesare de mma Kaesare, na muntua Onyankopɔn de mma Onyankopɔn.”—Mateo 22:21.
Enti yedi mmara so, yetua tow, na sɛ aban reyɛ biribi de aboa ɔmanfo a, yɛnsɔre ntia.
Tete no, Onyankopɔn ka kyerɛɛ ne nkurɔfo sɛ wɔnkɔ ako. Akyiri yi, Yesu kyerɛkyerɛɛ nkurɔfo sɛ wɔnnɔ wɔn atamfo. Ɛbaa no sɛn?
Tete no, Israelfo no dii ako wɔ Onyankopɔn din mu. Wei kyerɛ sɛ ɛnnɛ Onyankopɔn pene akodi so anaa?
Share Share Adɛn Nti Na Yehowa Adansefo Nkɔ Ɔko?
ijwfq ti 23